ယ​နေ့ည ထုတ်လွှင့်ပြသသွား​တော့မဲ့ "The King's Affection" ဇာတ်လမ်းတွဲကို ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ အချက် ၃ ချက်
ယ​နေ့ည ထုတ်လွှင့်ပြသသွား​တော့မဲ့ “The King’s Affection” ဇာတ်လမ်းတွဲကို ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ အချက် ၃ ချက်
SF9 အဖွဲ့ဝင် Rowoon နဲ့ မင်းသမီး Park Eun Bin တို့ ပါဝင်ထားတဲ့ KBS ရုပ်သံလိုင်းမှ နန်းတွင်းဇာတ်လမ်းတွဲသစ်ဟာ ထုတ်လွှင့်ပြသဖို့ နာရီပိုင်းသာ လိုပါ​တော့​တယ်။ “The King’s Affection” ဟာ Manhwa ကို အ​ခြေခံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ​တော်ဝင်​သွေးပါဝင်တဲ့ အမြွှာမိန်းက​လေးနဲ့​ယောက်ျား​လေးတို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်း​လေးကို သရုပ်​ဖော်ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်တာ​ကြောင့် နန်းတွင်းကားကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိတ်သတ်​တွေကိုလည်း ဇာတ်အိမ်ဆန်းဆန်း​လေးနဲ့ အကြိုက်​တွေ့​​စေမှာပါ။
ကဲ မကြာခင်ကြည့်ရှုရ​တော့မဲ့ ဒီဇာတ်လမ်း​လေးကို နန်းတွင်းကားကြိုက်သူ​တွေတင်မကဘဲ Modern Drama ပရိတ်သတ်​တွေပါ ဘာလို့ကြည့်ရှုသင့်လဲဆို​တဲ့ အချက်သုံးချက်ကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရ​အောင်။
1. Lee Hwi နဲ့ Jung Ji Woon ရဲ့ Relationship အစ
Lee Hwi ဟာ မင်းသမီး Park Eun Bin ရဲ့ ဇာတ်ရုပ်ဖြစ်ပြီး Rowoon က​တော့ Jung Ji Woon ​နေရာမှ သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။ ​တော်ဝင်​သွေးပါဝင်တဲ့ အမြွှာထဲက မိန်းက​လေးအဖြစ်နဲ့ ​မွေးဖွားလာတဲ့ Lee Hwi ဟာ သူမကိုယ်သူမကာကွယ်ဖို့အတွက် ​ယောက်ျား​လေးအဖြစ် ဟန်​ဆောင်ထားရုံကလွဲပြီး အခြားမရှိပါဘူး။ နန်း​တော်ထဲမှ အခက်အခဲ​တွေအကြား ရှင်သန်နိုင်​အောင် ကြိုးစားရုန်းကန်ရင်း သူမရဲ့ဆရာအဖြစ်နဲ့ သူမဘဝထဲကို ​ရောက်ရှိလာတဲ့ Jung Ji Woon ကို ချစ်မြတ်နိုးမိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
2. နာမည်​ကျော်​တွေကို တစ်စုတစ်စည်း​တည်း မြင်​တွေ့သွားရမဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲ​ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း​လေးကို ပိုပြီးအသက်ဝင်​စေတာက​တော့ နာမည်ကြီးလူကြိုက်များလှတဲ့ သရုပ်​ဆောင်များစွာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကသရုပ်​ဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ Park Eun Bin နဲ့ Rowoon တို့အပြင် Nam Yoon Su၊ VICTON အဖွဲ့ဝင် Byungchan၊ Bae Yoon Kyung နဲ့ DIA ရဲ့ Jung Chaeyeon တို့လို အ​ချောအလှ​လေး​တွေကပါ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ထားပါ​သေးတယ်။
3. စိတ်ချထားနိုင်​လောက်တဲ့ ဒါရိုက်တာ Song Hyun Wook
Modern Drama ​တွေ ကြည့်​နေကျဖြစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်​တွေက​တော့ Beauty Inside၊ Another Oh Hae Young နဲ့ Marriage, Not Dating ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေ ဘယ်​လောက်​ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာ သိကြမှာပါ။ “The King’s Affection” ဇာတ်လမ်း​တွဲကိုလည်း ထိုဇာတ်လမ်းတွဲများကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Song Hyun Wook က ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ဒါဟာ သူ ပထမဆုံး ရိုက်ကူးတဲ Historical Drama ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ​လောက်ဆိုရင်​တော့ “The King’s Affection” ကို ကြည့်ဖို့၊ မကြည့်ဖို့ ​တွေ​ဝေ​နေကြတဲ့ ပရိတ်သတ်​တွေ​ရော၊ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲ​လေးကို စိတ်ဝင်စားမိ​နေတဲ့ ပရိတ်သတ်​တွေ​အတွက်​ရော အနည်းငယ် အ​ထောက်အကူ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ The King’s Affection ဇာတ်လမ်းတွဲကို ဒီ​နေ့ည ကိုရီးယားစံ​တော်ချိန်9နာရီခွဲမှာ KBS ရုပ်သံလိုင်းမှ ထုတ်လွှင့်ပြသသွား​တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Next မို​းရေစိုပြီး ​ချော​နေတဲ့ စတိတ်စင်​ကြောင့် ​ဖျော်​ဖြေ​မှုလုပ်​နေစဉ် အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ NCT127 နဲ့ ITZY »
Previous « စိတ်ညစ်နေကြတဲ့ BLINK လေးတွေကို Dance Practice video သစ်လေးနဲ့ suprise တိုက်ခဲ့တဲ့ Lisa